In laga shaqeeyo Iswiidhan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / In laga shaqeeyo Iswiidhan
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 11 10 2021
Halkan waxaad ka akhrin kartaa warbixin ku saabsan in laga shaqeeyo Iswiidhan. Adigu waxaad tusaale ahaan heli kartaa warbixin ku saabsan sida aad u helayso shaqo, sida aad u bilaabi karto shirkad gaar kuu ah iyo sida suuqa shaqada ee Iswiidhan u shaqeeyo.
Halkan waxaa ku jirta warbixin ku saabsan in la shaqeeyo looguna talogalay
Bixi canshuurta marka aad adigu shaqayso
Waa khasab inaad canshuur ka bixiso mushaaradaada marka aad shaqayso. Shaqo bixiyahaagu waa inuu bixiyo kharashyada bulsho. Tani waxaa lagu magacaaba shaqo cadaan ah.
Waxaa jira faa'iidooyin badan in lagu shaqeeyo cadaan. Waxaa ka mid ah inaad adigu helayso:
Dad ku garanaya.
Xaqa fasax waalidnimo oo lacag leh.
Dhibcaha lacagta hawl gabka.
Lacag haddii aad xanuusato.